Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ala ọma jijiji na -ama jijiji na Alaska Peninsula
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ala ọma jijiji na -ama jijiji na Alaska
Peninsula ahụ bụ ebe na -eme mkpọtụ, ma na -anọdụ n'elu ebe nzukọ nke efere tectonic nke North Pacific na North America.
Ala ọma jijiji dakwasịrị Alaska Peninsula.
Ala ọma jijiji na -ama jijiji na Perryville.
Enweghị ọnwụ, mmerụ ahụ ma ọ bụ mbibi kọrọ.
US Geological Survey (USGS) na -akọ na oke ala ọma jijiji 6.9 kụrụ Alaska Peninsula n'ụtụtụ Satọdee.
The USGS gosiri ala ọma jijiji ahụ na 6.9 n'ogo ịdị ukwuu, ọkwa nkewapụtara dị ka nke “siri ike” yana akụkụ pere mpe nke dị n'okpuru “isi.”
Ala ọma jijiji ahụ, nke gaara eme ka ọ bụrụ ebe ewuru ewu, emeela ka mmezi nke Perryville, na mpaghara nke ọrụ seismic jupụta.
Ala ọma jijiji ahụ mere n'ụsọ oké osimiri nke Alaska Peninsula, ụzọ dị gịrịgịrị nke ala na agwaetiti ndị si n'oké Alaskan na -asọba wee banye n'Oké Osimiri Pasifik ruo Russia. Ndị bi na peninsula bụ ndị mmadụ bi na ya, obodo kacha nso na mpaghara ala ọma jijiji ahụ bụ Perryville, mmezi ihe dị ka mmadụ 100, nke dị ihe dị ka kilomita 85 (136km) n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ.
Peninsula ahụ bụ ebe na -eme mkpọtụ, ma na -anọdụ n'elu ebe nzukọ nke efere tectonic nke North Pacific na North America. Ọ bụ ebe ọtụtụ ugwu mgbawa na -arụ ọrụ na -ahụkarị nnukwu ala ọma jijiji. N'ọnwa gara aga, ala ọma jijiji ruru 8.2 kụrụ n'otu ebe ahụ oke ala Satọde kụrụ, ma ala ọma jijiji atọ nke 5.9, 6.1, na 6.9 sochiri ya. Ala ọma jijiji ahụ bụ nke kacha wee metụta United States kemgbe 1965, na nke kachasị na akụkọ ntolite ụwa kemgbe afọ 2018. Otú ọ dị, ọ nweghị ihe kọrọ.